ကမ္ဘာကျော်တွေရဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုကို မျက်ကွယ်ပြုခဲ့လေလား ကလေးငယ် | FOX Sports Myanmar
တင်းနစ် | ဇူလိုငျ 13, 2019
ကမ္ဘာကျော်တွေရဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုကို မျက်ကွယ်ပြုခဲ့လေလား ကလေးငယ်
ကျင်းပပြုလုပ်နေခဲ့တဲ့ ၀င်ဘယ်ဒန် အိုးပင်းပြိုင်ပွဲရဲ့ ဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာတော့ တင်းနစ်ပရိသတ်တွေအတွက် အနှစ်သက်ဆုံး ပြိုင်ဘက်နှစ်ဦးတွေ့ဆုံတဲ့ ပွဲစဉ်တစ်ပွဲပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးစကားနဲ့ ပြောရင်တော့ အသင်းကြီးတွေထိပ်တိုက်တွေ့တဲ့ ပွဲစဉ်ပဲဆိုကြပါဆို့။
တင်းနစ်လောကမှာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်လာတဲ့အထိ ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်နေဆဲ ရော်ဂျာဖက်ဒါရာ နဲ့ ရာဖေးနာဒယ်တို့ကတော့ ဒီနှစ် ၀င်ဘယ်ဒန်အိုးပင်းပြိုင်ပွဲရဲ့ ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်မှာ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။တကယ့်ကို ပြင်းတန်တဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုအသွင်နဲ့ ဖက်ဒါရာ ရဲ့ နာဒယ်တို့ နှစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့တာကြောင့် တစ်ကွင်းလုံးက ပရိသတ်တွေကော တစ်ကမ္ဘာလုံးက စောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့ တင်းနစ်ချစ်သူတွေကော ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာ စောင့်ကြည့်နေရတဲ့ ဒီပွဲစဉ်မှာတော့ ပွဲကြည့်စင်ပေါ်က ကလေးငယ်တစ်ဦးဟာ စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုသာ သဲကြီးမဲကြီးဖတ်နေခဲ့ပါတယ်။
နာဒယ်နဲ့ ဖက်ဒါရာတို့ရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုက သူ့အတွက်တော့ စာအုပ်တစ်အုပ်လောက်တောင် စိတ်လှုပ်ရှားမှုမပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီး ပရိသတ်တွေက လူမှုကွန်ယက်မှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီး တော်တော်လေးကို လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ post တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။
Federer-Nadal isn’t enough to drag this bored kid away from his book: https://t.co/WYP1EuGRc3 pic.twitter.com/VgaY5PBAps
— NY Daily News Sports (@NYDNSports) July 12, 2019
This kid reading book during #Fedal is not funny😁 he was here to see2GOATS actually🙄🙄 #Federer #Nadal pic.twitter.com/Xyr2nWDn37
— CleviiC (@cleviic) July 13, 2019
Just cannot believe this kid…in the middle of an amazing semi-final between Nadal and Federer ! Quite frankly the whole family look bored….must be an Indian cricket fan still upset about the loss !! Next time give itamiss and give your tickets to deserving fans in queue ! https://t.co/ArqAkX2Owq
— Neha Desai (@Fotardo) July 12, 2019
And there is this ignorant kid who’d no idea how privileged he is. Life isn’t fair.
— Piyush yadav (@piyushyadav928) July 12, 2019
ကဵင်းပူပလြုပ်နေခဲ့တဲ့ ဝင်ဘယ်ဒန် အိုးပင်း္ဘပိင်ြပြဲရဲႚ ဆီမီးဖိုင်နယ်ပြဲစဉ်မြာတော့ တင်းနစ်ပရိသတ်တေအြတကြ် အိံစ်ြသက်ဆုံး္ဘပိင်ြဘက်ိံစြ်ဦးတြေႚဆုံတဲ့ ပြဲစဉ်တစ်ပြဲပၝဝင်ခဲ့ပၝတယ်။ဘောလုံးစကားနဲႛေူပာရင်တော့ အသင်းဋ္ဌကီးတေထြိပ်တိုက်တြေႚတဲ့ ပြဲစဉ်ပဲဆိုကပၝဆိုႛ။
တင်းနစ်လောကမြာ ဆယ်စိုံစ်ြတစ်ခုကေဵာ်လာတဲ့အထ္ဘိပိင်ြဆိုင်မြူပင်းထန်နေဆဲ ရော်ဂဵာဖက်ဒၝရာ နဲႛ ရာဖေးနာဒယ်တိုႛကတော့ ဒီိံစြ် ဝင်ဘယ်ဒန်အိုးပင်း္ဘပိင်ြပြဲရဲႚ ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်မြာ ထိပ်တိုက်တြေႚဆုံခဲု့ကပၝတယ်။တကယ့်ကိုပင်းတန်တဲ့္ဘပိင်ြဆိုင်မအြသင်ြနဲႛ ဖက်ဒၝရာ ရဲႚ နာဒယ်တိုႛိံစြ်ဦးယဉ်္ဘြပိင်ြကစားခဲ့တာေုကာင့် တစ်ကငြ်းလုံးက ပရိသတ်တေကြော တစ်ကမ္တာလုံးက စောင့်ုကည့်ခဲ့တဲ့ တင်းနစ်ခဵစ်သူတေကြော ရင်ခုန်စိတ်လပ်ြရြားစြာ စောင့်ုကည့်နေရတဲ့ ဒီပြဲစဉ်မြာတော့ ပြဲုကည့်စင်ပေၞက ကလေးငယ်တစ်ဦးဟာ စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုသာ သဲဋ္ဌကီးမဲဋ္ဌကီးဖတ်နေခဲ့ပၝတယ်။
နာဒယ်နဲႛ ဖက်ဒၝရာတိုႛရဲႚူပင်းထန်တဲ့္ဘပိင်ြဆိုင်မကြ သူႛအတက်ြတော့ စာအုပ်တစ်အုပ်လောက်တောင် စိတ်လပ်ြရြားမမြပေိးိုံင်ဘူးဆ္ဘိုပီး ပရိသတ်တေကြ လူမကြန်ြယက်မြာ ဖော်ူပခဲ့္ဘပီး တော်တော်လေးကို လပ်ြခတ်ခဲ့တဲ့ post တစ်ခုဖစ်နေပၝတယ်။
Home Tennis ကမ္ဘာကျော်တွေရဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုကို မျက်ကွယ်ပြုခဲ့လေလား ကလေးငယ်